စော်ကဲ ( စ/ဆုံး ) – Grab Love Story
အလုပ်မှအငြိမ်းစားယူပြီး…စား/ဝတ်/နေရေး အစဉ်မပြေသော… ဦးသောင်းခန့်သည်… မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် (စေတီ)တစ်ဆူတွင်… (လုံခြုံရေး)ဝန်ထမ်း အလုပ်ရှိလေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် စဉ်…စိတ်တူ/ကိုယ်တူ ပြောဆိုမှုအဆင်ပြေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွေ့ဆုံရသလို… အထက်ဖါး/အောက်ဖိ… ဂုန်းဆင်းဘီးတပ်… နောက်ကျော(ဓါး) ဖြစ်ထိုးသည့်သူများနှင့်လည်း… တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။
ကြည်စရာကြည်ပြာလေးများဖြစ်သော… ချိုချို၊ ခက်မာနွေး၊ အေးသီတာသိမ့်တို့ဖြစ်လည်း… ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်။
ထိုအလုပ်တွင်… ဦးသောင်းခန့် မမြဲခဲ့ချေ ။ အောက်ခြေဝန်ထမ်းအချင်းချင်း… ညီညွှတ်မျှတမှု မရှိသဖြင့်… (၄/၅)လ,အကြာတွင်… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်ထွက်လိုက်လေတော့သည်။ ဦးသောင်းခန့် လင်မယားတွင် ငိုစား/ရယ်စား… ရတာနာလေးများ
လည်းမရှိသည့်အတွက်…ရရှိသည့်… (ပင်စင်)လစာလေးဖြင့်… ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းကြသည်။
များမကြာမီ… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်… စေတီတွင်ဘုရားပွဲ တော်ကျင်းပလေသည်။ လင်မယားနှစ်ဦးတည်းသာနေထိုင်… ဦးသောင်းခန့်၏ နေအိမ်တွင်… ဦးသောင်းခန့်တစ်ဦးတည်း… အထီးကျန်နေသည်။ ဦးသောင်းခန့်၏ ဇနီးဖြစ်သူသည်… ဇာတိကျေးရွာတွင်… အမွေကိစ္စ လုပ်ဆောင်စရာရှိသည့်အတွက်… ဇာတိမြေသို့ ပြန်သွားသောကြောင့်… ဦးသောင်းခန့်မှာ… တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေသည်။
တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေသည့်… ဦးသောင်းခန့်သည်… နံနက်နိုးသည်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး (ဘုရား)ဝတ်ပြုသည်။ ပြီးသည်နှင့် စားသောက်ချက်ပြုတ်သည်။ (tv)မှ သတင်းများနားထောင်သည်။ ကိုရီယားဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်သည်။ သီချင်းနားထောင်သည်။ တရား(CD)များဖြင့်… တရားနာသည်။ ပြီး… မျက်ခွံလေးလာသည့်အခါ
အိပ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူရွာပြန်သွားသည်မှာ (၈)ရက်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်။ အတူရှိနေစဉ်လည်း… အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာသည်ကို… အကြောင်းပြလျက်…ဖို/မ ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ချေ ။
ယနေ့…ဦးသောင်းခန့်… အိပ်ယာအဝင်စောခဲ့သည်။ အိပ်မက် မက်သည်။ မကိုးမကား… အမျိုးသ္မီးတစ်ဦးနှင့် ကာမ ဆက်ဆံသည်… ဟုမက်သည်။ လန့်နိုးလာသည့်အခါ… ဆီးကြောများ
တင်းပြီးဆီးသွားချင်လာသည်။ သို့ဖြစ်၍… ဦးသောင်းခန့်သည် ရေအိမ်သို့သွားကာ ဆီးသွားသည်။ ထို့နောက် အိပ်ယာသို့ပြန်ကာ… ဝင်အိပ်သည်။ ဟိုလှိမ့်/ဒီလှိမ့် ဖြင့်… အိပ်မပျော်ပေ။ အိပ်မက်ထဲမှ အမျိုးသမီးကိုမျက်နှာ မသဲကွဲသော်လည်း… တဏှာစိတ်ဆိုသည်က… ပူးကပ်လာပြီဆိုလျှင်… ဖယ်ထုတ်လို့ မရချင်။
ထို့ကြောင့်ဦးသောင်းခန့်…အိပ်ရန် မကြိုးစားတော့ပေ။ (အပြာ)ကားကြည့်ပြီး လက်သမားလုပ်ရန်လည်း… နှမြောနေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အိမ်တံခါးလုံခြုံစွာ သော့ခတ်ပြီး… အပြင်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့သည်။ အတန်ကြာ လမ်းလျှောက်မိသည့်အခါ… မီးရောင်ထိန်ထိန်ကို လှမ်းမြင်ရသဖြင့်… ဘုရားပွဲမှ မီးဖြစ်မည်ဟု… တွေးမိလေသည်။ အတွေးနှင့်အတူ ခြေဦးသည်လည်း ဘုရားပွဲဆီသို့… ဦးတည်သွားလေတော့သည်။
ပွဲဈေးတန်းနှင့်နီးလာသဖြင့်…လူသွား/ လူလာ စိပ်လာသည်။ ဈေးတန်းအတွင်း စဝင်မိသည်နှင့်… ဝဲ/ယာ မုန့်ဆိုင်များနှင့် ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းသည့် ဈေးဆိုင်များကို ငေးယင်း ကြည့်ယင်းဖြင့်… လူရေစီးချောင်းအတွင်း… စီးမျောသွားလေ၏။ အိုးကြီး/ အိုးလတ်/ အိုးငယ်များကိုလည်း ရှာဖွေကြည့်ရှု့မျက်စိကျွေးယင်း… လျှောက်လာခဲ့ရာ… နံမည်ကြီးဇာတ်ပွဲရုံတွေအနီး ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဆက်၍လျှောက်လာခဲ့ရာ… ဗလာပွဲနှင့် စတိတ်ရှိုးစင်များအနီးသို့… ရောက်လာပြန်သည်။ ရှေ့မှလျှောက်နေသည့်တောင့်တင်းသည့်… အိုးလတ်(နှစ်)လုံးသည်… ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည့်… စတိတ်ရှိုးလူအုပ်ကြားအတွင်းသို့… တိုးခွေ့ဝင်သွားကြသဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်(ပစ်မှတ်)
ပျောက်သွားခဲ့သည်။ ရပ်ကြည့်ရန်လည်း အတန်ငယ်ဝေးနေ… စကားပြောသလိုလို သံချပ်ထိုးသလိုလို… မပီမသသီချင်းသံများကြောင့် (စင်)နှင့်နီးရာသို့ထပ်ရွှေ့မိ၏။
တင်မာနွေးသည် စတိတ်ရှိုးကို စိတ်ပါဝင်စားနေစဉ် မိမိတင်ပါးကို လက်လာသရမ်းသဖြင့်… မသိမသာ
နောက်သို့ငဲ့ကြည့်လိုက်ရာ… မိမိနှင့်အသက်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်းရှိမည့် အမျိုသားနှစ်ဦးဖြစ်နေသည်။ မသိဟန်ဆောင်လျက် ဆက်ကြည့်နေစဉ်… ပူပူနွေးနွေး အချောင်းဖြင့်… အထောက်ခံရလေသည်။ တင်မာနွေးသည်… အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ (၂)နှစ် မပြည့်သေးချေ ။ ဖို/မ ဆက်ဆံရေးတွင်… ဘွဲ့ရတစ်ဦးအဆင့် မဟုတ်ပေမဲ့… အထက်တန်းအောင်ပြီး အဆင့်လောက်… အတွေ့အကြုံ ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နောက်မှထောက်နေသည့်… ပူနွေးနွေး အချောင်းကြီးသည်… ဘာဖြစ်သည်ဆိုတာကို သိသည့်အပြင်… ယခုထက် အဆင့်ကျော်လာနိုင်သည်ကိုလည်း… ရိပ်စားမိသဖြင့်… မိမိလည်း အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်… ရှောင်ထွက်နိုင်ရန်အတွက်… မသိမသာ မျက်လုံးကစားလျက် ထွက်ပေါက်ရှာနေ၏။ ထိုအချိန်မှာပင်… လက်တစ်ဖက်သည် မိမိဆီးခုံကို ထမိန်ပေါ်ကပင် လာစမ်းသဖြင့်… လက်သည်းဖြင့် ဆိတ်လိုက်ရသည်။ လူအုပ်၏အပြင်ဖက်တွင်… ဦးသောင်းခန့်ကို လှမ်းမြင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်…
“အဘရေ…အဘ… သမီးဒီမှာ… ထွက်လာခဲ့မယ်…”
ထွက်ဖို့ပြင်သည့်အခါ…အနောက်မှနေ… လက်မောင်းကို ဆွဲထားသြဖြင့်…
“ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲ…ဟိုမှာ ငါ့(ဘကြီး) လာခေါ်နေပြီ… နင်တို့မလွှတ်ယင် ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်…”
ဦးသောင်းခန့်သည်(အဘ)ဟုခေါ်သံကို ကြားသော်လည်း… မိမိကိုခေါ်သည်ဟုမထင်ပေ။ သို့သော် အသံကိုကြားဖူးသလိုရှိသဖြင့် လှမ်းကြည့်ရာ… တင်မာနွေးကိုမြင်မိသွားသည်။ တင်မာနွေး၏ အခက်အခဲကိုလည်း ရိပ်မိလိုက်သဖြင့်… လူအုပ်အနီးတိုးကပ်သွားကာ…
ထိုအခါမှ…လူငယ်နှစ်ယောက်သည်… မလွှတ်ချင်/လွှတ်ချင်ဖြစ်…လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ တင်မာနွေးလည်း ရင်တုန်/ပန်းတုန်ဖြင့်… ကောက်ရိုးတစ်မျှင်… ကယ်တင်ရှင် ဦးသောင်းခန့်ရှိရာသို့… ထွက်လာနိုင်တော့၏။
ဟု…ပြောကာ…ဦးသောင်းခန့်၏ ညာလက်မောင်းကို ကိုင်လျက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ အတန်ငယ် လျှောက်လာသည့်အခါ …
ပြောလည်းပြော… ဦးသောင်းခန့်ကိုလည်း… ဆွဲခေါ်ကာ လူကြားအတွင်းသို့ တိုးဝင်လေသည်။ စင်နားနီးသဖြင့်… အတွင်းသို့ သိပ်မတိုးနိုင်ချေ ။ ရောက်သည့်နေရာ၌ပင် စင်ပေါ်ကို ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်ကို… အနောက်ဖက်တွင် ထားကာ… စင်ပေါ်ကိုငေးမောကြည့်ရှု့ယင်း… မိမိရှေ့တွင် လူကွယ်သည့်အခါ… ခြေဖျားထောက်ကာ ထောက်ကာ ကြည့်ရသည်။
ထို့ကြောင့် မကြာခဏ တင်မာနွေး၏တင်ပါးနှင့် ဦးသောင်းခန့်၏ဆီးခုံတို့ ပွတ်တိုက်မိကြလေသည်။ ပွတ်တိုက်မှုများလာသည့်အခါ တာဝန်အရ… (လီး)ရမည်ဖြစ်သော်… အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူဖြစ်သည့်… ဦးသောင်းခန့်မှာ… တောင်သော်လည်း လူငယ်ကဲ့သို့… ထောင်မတ်မနေပေ။ မာမာတင်းတင်းတော့ ဖြစ်လာသည်။
တင်မာနွေးမှာ မကြာမီက ရွယ်သူလူငယ်နှစ်၏ ကိုင်တွယ်ခံရမှု… အထောက်ခံရမှုတို့ကို တွေ့ ကြုံခဲ့သော်လည်း… ကြောက်စိတ်ကြောင့် မည်သည့်ခံစားမှုမျှ မရှိခဲ့ချေ ။ သို့သော်… ယခုအခါ… ဦးသောင်းခန့်၏ မာမာအချောင်းကြီးဖြစ် မိမိတင်ပါး ပွတ်တိုက်မိသည့်အခါ… စိတ်လှုပ်ရှားလာမိသည်။ ခြေဖျားထောက်ကာ ထောက်ကာ ကြည့်ရသည့် အတွက်လည်း… တင်ပါးနှင့် မာမာအချောင်း ကြီးတို့၏ အထိအတွေ့ကိုနှစ်သက်လာသည်။
ဦးသောင်းခန့်သည် အသက်ကြီးလာသဖြင့်… အတွင်းဘောင်းဘီဝတ်လေ့ဝတ်ထ… မရှိတော့ချေ။ တင်မာနွေးကိုလည်း…စတင်တွေ့မိ… ခင်မင်စအချိန်ကတည်းက… တင်မာနွေး၏ စွင့်ကားလှပသော အိုးကြီးကိုကြည့်ပြီး… ပြစ်မှားနေသူ ဖြစ်သည်။
တင်မာနွေးသည်လည်း ဦးသောင်းခန့်နှင့် စတင်ခင်မင်မိကတည်းက… မိမိအပေါ် မရိုးမသားအကြည့်တို့ကို… သတိပြုခဲ့မိသော်လည်း… စိတ်ကထူးဆန်းစွာ သဒ္ဓါကြည်ဖြူနေမိသည်။
မိမိ၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည့်… ချိုချိုနှင့် အေးသီတာသိမ့်တို့ထံမှ ကြားသိရသည့်… ဦးသောင်းခန့်နှင့် ချိုချိုတို့ (V.I.P.)သန့်စင်ခန်းတွင်… ကာမဆက်ဆံမှု… အေးသီတာသိမ့်ပါ… ထိုသန့်စင်ခန်း၌ပင်… ဦးသောင်းခန့်နှင့် တဏှာလွန်ကျူးကြသည်များကို… ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ… ပြောပြခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက… ဦးသောင်းခန့်ကို တင်မာနွေး မသိစိတ်ကနေ သဒ္ဓါလွန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလိုမိမိတင်ပါးကို… ဦးသောင်းခန့်၏ မာမာအချောင်းကြီး အမြှောင်းလိုက် ကပ်နေသိအခါ… လိုလိုချင်ချင်ပင် ဖင်ကိုမသိမသာ
ဦးသောင်းခန့်သည် အခြေအနေအစဉ်ပြေနေသဖြင့် တင်မာနွေး၏ပုခုံးကိုကိုင်ကာ မိမိဆီးခုံဖြစ် တင်ပါးကို ဖိကပ်ထားသည်။ တင်မာနွေးလည်း လက်နောက်ပစ်၍ ဦးသောင်းခန့်ခါးကို ကိုင်ထားသည်။ ကြာလာသည့်အခါ တင်မာနွေး၏ ပိပိအတွင်းဝယ် ကာမရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တို့ ယိုဖိတ်လာလေတော့သည်။
တင်မာနွေးသည်ပြောဆိုပြီးနှင့် လူအုပ်ကြားမှ တိုးထွက်နေသဖြင့်.. တင်မာနွေး လူအုပ်ကြားအတွင်းမှ တိုးထွက်သွားသဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်လည်း နောက်ကနေ လိုက်သွားရလေ၏။
တင်မာနွေးမုန့်ဈေးတန်းသို့… သွားသဖြင့် လိုက်ရပြန်သည်။ တင်မာနွေးသည် (ရေမုန့်)ဆိုင်တွင်… (ရေမုန့်)အနည်းငယ်ဝယ်ပြီး… ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ဆိုင်တွင်… ကောက်ညှင်းကျည်တောက် ဝယ်ပြန်သည်။ ထို့နောက်…ရေသန့်(၄)ဗူးနှင့် (တစ်ရှုး) (၂)လိပ်ဝယ်ပြီး…
တင်မာနွေး ခေါ်ရာနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင်… ဦးသောင်းခန့် တစ်ယောက်လိုက်မိချေပြီ။ အတန်ငယ်သွားပြီးနောက်… ကတ္တရာလမ်းမှ သွေဖည်ကာ… အနီးရှိစက်ရုံကြီး တစ်ခုသွားရာလမ်းကို… တင်မာနွေး ဦးတည်လိုက်သဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်လည်း…
ထိုလမ်းသည် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ… နေထိုင်သူများ အချို့သာ အသုံးပြုသောလမ်းဖြစ်လေသည်။ အန္တ
ရာယ်မရှိသော်ငြားလည်း… လူသွား/ လူလာ ကြဲ သောလမ်းဖြစ်လေသည်။ ကားမှတ်တိုင် (၂)တိုင်လောက်အကွာ အဝေးရှိမည့် နေရာအရောက်တွင်… ပိတောက်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိလေသည်။ ထိုပိတောက် ပင်စည်ပတ်လည်ကို… သစ်သားခုံပတ်လည်း ရိုက်ထား၏။
ဦးသောင်းခန့်လည်း…အိမ်မှ စထွက်ကတည်းက… မထိုင်ရသေးသဖြင့်… ဟန်ပင်မဆောင်နိုင်… ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်သည်။
“မောတာပေါ့ သမီးရယ်…အိမ်ကနေ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တာလေ… ပွဲခင်းထဲလဲ မတ်တပ် မတ်တပ်နဲ့… ဒီရောက်မှပဲ ထိုင်ရတော့တာ…”
အဘက လူကသာမောတာနော်… အခုနက အဘ ပစ္စည်းကြီးက…အဟင်းဟင်း..”
“အေးကွယ်…သမီးတင်ပါးကြီးကလဲ အိနေတာပဲ ဆိုတော့…”
“အေးကွယ်…သမီးက ခါးလေးသိမ်ပြီး… ရင်ရော/တင်ကော လှတဲ့အပြင်… မျက်နှာလေးကပါ ချစ်စရာကောင်းနေတာကိုး…”
တင်မာနွေးသည်စားဦးစားဖျား (ရေမုန့်)ကို… ဦးသောင်းခန့် အား လှမ်းပေးသည်။ တင်မာနွေး ကိုယ်တိုင်လည်း… (ရေမုန့်)စားလေသည်။ (ရေမုန့်)မှာ အရသာရှိသော်လည်း… ဗိုက်မပြည့်သည့်အတွက်… ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ကို… ဆက်စားကြသည်။ တင်မာနွေးမှာ အစားစားစဉ်… နင်မှာစိုးရိမ်၍… ရေ တစ်ကြိမ်… နှစ်ကြိမ်သောက်သော်လည်း ဦးသောင်းခန့်ကတော့… အစာစားပြီးမှ… ရေသောက်လေသည်။
“အဘ ဗိုက်ပြည့်ပြီး…ဗိုက်လေးသွားပြီ… အဘပေါင်ပေါ်မှာ… ခဏ လှဲမယ်နော်… အဘဟာကြီး တောင်နေသေးလား…”
တင်မာနွေး သည် ဦးသောင်းခန့်၏ ပေါင်ပေါ် လှဲအိပ်ယင်း… လီး ကိုလှမ်းကိုင်ကြည့်သည်။
ပြောလည်းပြော… ပုဆိုးကိုလည်း ဆွဲလှန်လိုက်၏။ တင်မာနွေး၏အာငွေ့ကြောင့်လည်းကောင်း ပုလွေမှုတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်းကောင်း အဖိုးကြီး ဦးသောင်းခန့်၏လီးသည် မယုံနိုင်စရာ တောင့်တင်းမာကြောလာလေသည်။ ဦးသောင်းခန့်သည်လည်း တင်မာနွေး မိမိပေါင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းလျက် မိမိလီးကိုပုလွေမှုတ်နေစဉ်ကပင် တင်မာနွေး၏ နို့အုံနှင့်တင်သားအစိုင်အခဲကြီးများကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်နေခဲ့သည်။
ဟု..ဦးသောင်းခန့်က တင်မာနွေးကို တိုးတိုလေး ကပ်ပြောလေသည်။
လီးကိုငုံလျက်ပုလွေပေးမပျက် တင်မာနွေးက ဖြေလိုက်သည်။ ဦးသောင်းလည်း တင်မာနွေး၏ ထမိန်စကိုခါးပေါ်ထိဆွဲလှန်တင်လိုက်ပြီး တင်သားတင်းတင်းရင်းရင်းများကို၊ လျှောက်နမ်းလျှောက်စုပ်ယင်း၊ ပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း ဖွဖွလေးလက်ပူတိုက်နေ၏။ တင်မာနွေးလည်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုမသိမသာ ကားပေးလိုက်သည်။ ဦးသောင်းခန့်ကလည်း ပွင့်အာလာသည့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို၊ လျှာဖြင့် လျှက်လေတော့သည်။ ဖင်တုံးကြီးများကိုလည်း၊ ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။
ပုလွေကောင်းမှုကြောင့် မာတောင်တောင့်တင်းလာသည့် လီးကြီးဖြင့်၊ တင်မာနွေး၏စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လိုးချင်လာသလို၊ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနှင့် စောက်စိတို့ကိုစုပ်/မှုတ်/ လျက် လုပ်ပေးမှုကြောင့် ထွက်ရှိလာသည့် စောက်ရည်များကိုလည်း တပြတ်ပြတ်လျှက်ကာ၊ အလိုးကြီးလိုးကြရန်၊ နှစ်ဦစလုံးထန်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
“ကလေး….အဘ..လိုးတော့မယ်ကွာ….. ဒီ ခုံပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီးအဘ ဖက်ကိုဖင်ပေးထား……”
တင်မာနွေးသည်.. ဦသောင်းခန့်နေခိုင်းသည့်အတိုင်း.. ပိတောက်ပင်ကိုမျက်နှာပြကာ ဦးသောင်းခန့်ကို ကျောပေးလျက်.. ထမိန်ကို ခါးထိဆွဲတင်ထားသည်။ ဦးသောင်းခန့်သည်မတ်တပ်ရပ်လျက် ခုံပေါ်တွင် မိမိကိုကျောပေးလျက် အလိုးခံရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည့် စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ မိမိလီးကိုလျှောကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။
အသံနှင့်အတူ….လီးကြီးသည် စောက်ဖုတ်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားကို.. ပွတ်တိုက်ချိတ်ဆွဲကာ.. အဆုံးဝင်ရောက်သွားလေတော့သည်။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရကိုင်ကာ.. ခပ်သွက်သွက်ကလေးဆောင့်လိုးမှုကြောင့်….
တင်ပါးကိုနောက်သို့ အစွမ်းကုန်တိုးကပ်ထားယင်း… တင်မာနွေး.. တစ်ချီပြီးလေပြီ။ ဦသောင်းခန့်ကလည်း လီးကိုအဖုတ်အတွင်းသို့.. တင်းကြပ်စွာ ဖိကပ်လျက်.. မွှေပေးနေ၏။ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကိုလည်း ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ယင်း.. လီးကိုဖြေးညှင်း စွာအထုတ်/ အသွင်းပြန်လုပ်လေသည်။ တဏှာစိတ်တက်နေသည့်တင်မာနွေးက
အရှိန်ဖြေးစွာထိန်းလိုးနေယင်း…တင်မာနွေး၏နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲယူစုပ်နမ်းလေတော့သည်။ နှစ်ဦးသား အားရအောင်ကစ်ဆင်ဆွဲပြီးနောက်.. နို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်လျက် အရှိန်ပြင်းစွာ လိုးလေတော့သည်။
“အား…လိုး…လိုး..အဘ….အဘ..လရည်တွေ ထွက်လာအောင်.. နာနာတာဆောင့်လိုးပါအဘရယ်…..”
လိုးသံများနှင့်အတူ. တင်မာနွေး.စောက်ခေါင်းအတွင်း၌ ပူကနဲ..ပူကနဲဖြစ်ကာ.. သုတ်ရည်များဝင်ရောက်လာတော့သည်။
ဦးသငေ်းခန့်နင့်တင်မာနွေးတို့သည် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဝက်မှိန်း မှိန်းနေကြကာ အဖုတ်အတွင်းလီးကိုစိမ်လျက် တစိမ့်စိမ့်အရသာခံစားနသေလို လီးကို အစိမ်ခံလျက် စောက်ဖုတ်ကလည်း လီးအရသာကို တ‌မြေ့‌မြေ့ခံစားနေကြလေသည်။ အတန်ငယ် အမော‌ပြေ၍ လီးကပျော့ခွေထွက်ကျလာမှသာ
နှစ်ဦးသားရသေန့်တစ်ဗူးစီကိုင်လျက် ပိတောက်ပင်အနီးဝန်းကျင်တွင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ကြလေတော့သည်။ ရေဆေးပြီးသွားသည့်အခါ မူလခုံပေါ်တွင် ပြန်ထိုင်ကြလေသည်။
“ဘာလဲဟ နင်ကလဲ အရင်းမရှိ အဖျားမရှိ”
“ဟီး ဟီး အဘကလဲ ချိုချိုက‌ သမီးကို ‌ပြောပြတယ် အဘက အသက်ကြီးပေမဲ့ လိုးနိုင်တုန်းပဲတဲ့”
“အော် သမီးရယ် မလိုးရတာ နဲနြဲကာသွားပြီလေ သမီးကလဲ အစစအရာရာ စွဲဆောင်မှု ကောင်းနေတော့ နောက်တစ်ချီတောင် လိုးချင်သေးတယ်”
“အောင်မယ် အောင်မယ် ကြိုတင်စရံ ချိတ်နေပြန်ပါပြီနော်”
“အဟုတ်‌ပြောတာသမီးရဲ့ သမီး တင်တွေ ရင်တွေကတင်း တင်းရင်းရင်းနဲ့ အချိုးကျကျလေး ဖြစ်နေတော့ အဘလေ သမီးကို လိုးပြီးယင်း လိုးချင်ပဲကွာ”
ဦးသောင်းခန့်သည် စကားတ‌ပြော‌ပြောနှင့် ဘယ်ဖက်ဘေးတွင် ကပ်ထိုင်နသေည့် တင်မာနွေး ၏နို့အုံကို အင်္ကျီအပေါ်ကနေ ဆုပ်နယ်နေတော့သည် ။
“အဘ ချိုချိုနဲ့ ဘယ်နှယ်ခါတောင် လိုးပြီးပြီလဲ”
“ဟာ ညည်းကလဲ လစ်ယင်လစ်သလို တွေ့နေကြတာ ဘယ်လိုလုပ် မှတ်မိမှာလဲ”
“ဒါဆို အေးသီတာသိမ့်ကို လိုးတာလဲ မရေတွက်နိင်တော့ဘူးပေါ့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အဘ”
တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်၏လီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ဆွဲကိုင်ကာ ညှစ်ဆွဲ ဆွဲလိုက်သဖြင့်
ဦးသောင်းခန့်သည် ချော်လဲ လဲထိုင်လုပ်၍ တင်မာနွေးအဖုတ်ကို ညာလက်ဖြစ်နှိုက်လိုက်သည်။ ထမိန်အပေါ်ကနေ အဖုတ်ကို လျောတိုက် ပွတ်တိုက်နသေည့်အပြင် ဘယ်လက်ကလည်း တင်မာနွေး ၏ ဘယ်နို့အုံကို ဖျစ်ညှစ်နယ်ဖတ်နေသည်။
“အို အဘ နော် သမီး အဝတ်အစားတွေ ‌ကြေမွကုန်ပါပြီ… ဟာ မရဘူး မရဘူး အဘ လဲ အဝတ်အစားတွေချွတ် သမီးလဲ ချွတ်မယ်”
တင်မာနွေးသည်ဦးသောင်ခန့်လက်များကို တွန်းဖယ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ကာ ကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစားကို ချွတ်လသေည်။ ဦးသောင်းခန့်လည်း တင်မာနွေး၏ ကိုယ်လုံးတီးအလှကို ရင်သပ်ရှုမောစွာ ငေးကြည့်နေမိသည်။
“ဟာ—-အဘ ချွတ်လေကွာ သူများဟာကို လာငမ်းနေသေးတယ်”
ဦးသောင်းခန့်လည်း ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ ခုံေါ်တင်လိုက်သည်။
” ကြည့် လူလည်ကြီး အင်္ကျီကျတော့ မချွတ်ဘူး”
“လာပါ သမီး ရယ် အဘ ဂျာချင်နေပြီ ”
” အဘ နော် သမီး ကို ငရဲမပေးနဲ့”
” ငရဲမပေးဘူး လျှာပေးမှာ ဟ ”
တင်မာနွေးခုံပေါ်ထိုင်သည်နှင့် ဦးသောင်းခန့်သည်‌ မြေပေါ်ဒူးထောက်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို ခေါင်းဝင်ရလောက်လေးတော့သည်။
” အိုး—ဘယ်လိုမှလဲ ‌ပြောမရ ဆိုမရ အင့်_အ.အ–အိုး———”
လက်မ နှစ်ဖက်ဖြင့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြဲကာ လျှာဖြင့် အထက်/အောက် စုန်/ဆန် ဂျာလေတော့သည်။
” အိုး–စုပ်–စုပ်–အစိကိုပါ သိမ်းကြုံးစုပ်လိုက်စမ်းပါ အဘ ရယ် ”
တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်၏ ဆံပင်များကို ဆုပ်ကိုင်ယင်း ဖင်ကြီး‌မြှောက်ကြွ‌မြှောက်ကြွဖင့် ကာမ အရည်များထွက်ရန် တာစူနေပြီဖစ်သည်။
ဦးသောင်းခန့်က အစိကိုစုပ်ယင်း နို့သီးခေါင်းလေးများကို ပွ‌တ်‌ခြေသောအခါ တင်မာနွေးမှာ ထွန့်ထွန့်လူးလျက်
” အီး——ဟ,ဟ–ပြီးပြီ အဘ‌ရေ ပြီးပြီ ”
အဖုတ်အတွင်းမှထွက်ကျလာသည့် သုတ်ရည်များ ဦးသောင်းခန့်လျာဖြင့် ကြုံးလျှက်လေတော့သည်။ စောက်ရည်များမစင်တစင် အချိန်တွင် ဦးသောင်းခန့်သည် မတ်တပ်ထရပ်ပြီး သုတ်ရည်အရသာ‌ကြောင့် အနည်းငယ်မာလာသည့် လီးကို ဂွင်းထုခိုင်းလသေည်။ တင်မာနွေးလည်း ဂွင်းထုပေးယင်း (ကစ်ဆင်)ဆြွဲကလသေည်။ ငယ်ရွယ်တောင့်တင်းသည့် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို ထပ်မံလိုးရတော့ မည်ဆိုသော အသိစိတ်‌ကြောင့် လီးသည် မကြာခင် မာ‌ကြောလာလေသည်။ တင်မာနွးလည်း (ကစ်ဆင်)ဆွဲနေစဉ် အဘပါးစပ်မှ
ခဏ အကြာတွင် (ကစ်ဆင်)ဆြွဲခင်းကို နားလိုက်ကြပြီး လိုးရန်ပြင် ကြတော့သည်။ ဦးသောင်းခန့်သည် တင်မာနွေး ၏ညာ‌ခြေကို မိမိဘယ်ပုခုံးပေါ် ထမ်းလိုက်သည်။ မိမိညာ‌ခြေကို ခုံပေါ်အားပြုလိုက်သည်။ ဟ,ပြဲဖြစ်သော စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့လီးထည့်ရန်ကြိုးစားစဉ် တင်မာနွေးက အလိုက်သိစွာ လီးကိုလှမ်းကိုင်ပြီး အဖုတ် ဝတေ့ပေးလေသည်။ ပွင့်အာနသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ဇွပ် –ဗြွတ် အသံနှင့်အတူ လီးက ‌ဖြောင့်တန်းစွာ ဝင်ရောက်လေတော့သည်။ အရှိန်ပြင်းစွာ တစ်ချက် အဆောင့်တွင်
” အွတ်–အင့် အင့် အ ဘ ချိုချိုနဲ့ အေးသီတာသိမ့်တို့ကိုရော ဒီလိုပဲ ဆောင့်လိုးသလား ”
“အင်း တခါတလေတော့ ဆောင့်လိုးဖြစ်တာပေါ့ ”
“ဟုတ်–အင်း–သမီး လဲ အဘ တချက်တချက် ဆောင့် ဆောင့် လိုးတာ– အ– ခံ ခံ လို့ကောင်းတယ်ရှင့်—”
ဦးသောင်းခန့်သည် နို့ကိုပါ ကုန်းစို့လိုက်သဖြင့်
“အိုး——သ သ မီး ပြီ ပြီး ပြန်ပြီတော့——”
တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်ခါးကို မမှီတမှီ လှမ်းဖက်ကာ နောက်ပေါင်တစ်ချောင်းကိုပါ ညာပုခုံးပေါ်တင်လိုက်သဖြင့် ဦးသောင်းခန့်လည်း ညာ‌ခြေကို အောက်ချလိုက်ရလေသည်။ အတင်းကာရော ဆွဲဖက်ထားကြသဖြင့် ဆီးခြုံခင်း ထိကပ်နေတော့၏။ နှစ်ဦးစလုံးစည်းချက်ညီညီ ဖင်ဝှေ့နေကြတော့သည်။ ထို့နောက် ဦးသောင်းခန့်က ‌ဖြေး‌ဖြေးမှန်မှန်လေး ပြန်လိုးယင်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့သုတ်ရည်ပူများ ပန်းထုတ်နိုင်ရန် ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးရပြန်သည်။
” အိုး—အင့် အင့် အ အင်း ဟင်း ပြီး ပြီး လိုက်တော့ အဘ——”
ပူကနဲ ပူကနဲ သုတ်ရည်များ အဖုတ်အတွင်းဝင်ချိန်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာတင် တင်မာနွေးလည်း တစ်ချီထပ်ပြီးပြန်သည်။ အတော်ကြာကြာ အနားယူကြပြီးနောက် တင်မာနွေးကို ခုံပေါ်တွင် ပုဇွန်ထုပ်ကွေးခိုင်းလျက် စိမ်လိုးကြပြန်လေပြီ။ ဦးသောင်းခန့်သည် ဤကဲ့သို့ သမီးအရွယ် ‌မြေးအရွယ်ကလေးမလေးသုံးဦးအား လိုးခဲ့ရခြင်း‌ကြောင့် မရွယ်ပဲ စော်ကဲမင်း ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
(ကောင်း လိုက် တာ လေးလေး ရယ်)